Iplagi yebhetri, isinxibelelanisi seadaptha, iPlagi ekhawulezayo- iNBC
Olu luhlu lweemveliso luhlangabezana ngokungqongqo nesitifiketi se-UL, esingasetyenziselwa ngokukhuselekileyo kunxibelelwano lwamalungiselelo. Izixhobo eziqhutywa ngamandla, Iinkqubo zeUPS Izithuthi zombane. izixhobo zonyango i-AC / DC yamandla njl njl.
Indibaniselwano isinxibelelanisi Power PA350
Umdibaniso wesidibanisi samandla PA180
Umdibaniso wesidibanisi samandla PA120
Umdibaniso wesidibanisi samandla PA75
Umdibaniso wesidibanisi samandla PA45
I-NBC Electronic Technologic Co, Ltd. (NBC) isekwe eDongguan City, China, ineeofisi eShanghai, eDongguan (Nancheng), eHong Kong nase-USA. Igama lodumo lenkampani, i-ANEN, luphawu lokhuseleko lwemveliso, ukuthembeka kunye nokusebenza kwamandla. I-NBC ngumenzi ophambili wezixhobo ze-electroacoustic kunye nezihlanganisi zamandla. Siye saseka ubudlelwane bexesha elide kunye neempawu ezininzi zehlabathi eziphezulu. Umzi-mveliso wethu udlulile kwizitifiketi ze-ISO9001, ISO14001, IATF16949.
China Umthengisi kwizinga eliphezulu zeplastiki ngokuhambisa
Idilesi: NO.20, lane2, Nanxin Road, 3rd Industrial Zone, Nanzha, Humen Town Dongguan, Guangdong, China